Japan waxay ku maalgelinaysaa $ 10 bilyan adduunka Mashaariicda kaabayaasha LNG: – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Japan waxay ku maalgelinaysaa $ 10 bilyan adduunka Mashaariicda kaabayaasha LNG:
Japan waxay ku maalgelinaysaa $ 10 bilyan adduunka Mashaariicda kaabayaasha LNG:
Wasiirka warshadaha ee dalka Japan ayaa Khamiistii sheegay in istaraatiijiyad kor loogu qaadayo suuqa caalamiga ah ee LNG laguna xoojinayo amniga korantada.
Tallaabadan, ayaa laba jibaaraysa ballan-qaad ay Japan laba sano ka hor u fidisay silsiladaha tamarta, waxay ku soo beegmaysaa iyadoo iibsadaha ugu weyn dunida ee LNG uu higsanayo inuu yareeyo ku tiirsanaanta tamarta ka yimaada Bariga Dhexe maadaama xiisadaha sii kordhaya ee gobolka ay halis gelinayaan xasilloonida shidaalka adduunka.
Isagoo ka duulaya balanqaadka Japan laba sano ka hor oo ah maalgashiga ama maalgalinta in kabadan $ 10 bilyan silsiladaha tamarta, waxaan sameyneynaa ballanqaad cusub oo ah 10 bilyan oo doollar oo dheeraad ah iyo wadarta guud ee waaxyada dowladda iyo kuwa gaarka ahba, ayuu yiri Isshu Sugawara, Wasiirka Dhaqaalaha. , Ganacsiga iyo Warshadaha (METI), oo ku hadlaya Tokyo shir sannadeedka LNG ee Soo Saarayaasha-Macaamiisha.
Iyada oo qayb ka ah dadaalka Japan ee ballaarinta isticmaalka shidaalka aadka loo qaboojiyey, ayaa waddanku sidoo kale qorshaynayaa in uu tababaro 500 oo khubaro ku ah tikniyoolajiyadda LNG, ayuu yidhi. Ballanqaadkeedii 2017 ee lagu xoojinayo silsiladaha sahayda tamarta ee Tokyo ayaa horey u ballanqaaday inay tababar siinayso 500 oo khubaro ah oo ay ka mid yihiin teknolojiyada soo dhawaynta LNG iyo xeerarka deegaanka.
“Marka la sameeyo ballanqaadyadan si loo caawiyo horumarinta suuqa caalamiga ah ee LNG, Japan waxay si adag uga shaqeyn doontaa xoojinta amniga tamarta adduunka,” ayuu yidhi.
Balanqaadkii hore ee Japan ayaa waxaa sameeyay wasiirkii hore ee METI Hiroshige Seko shirkii LNG ee Adeeg Bixiyaha iyo Adeegsiga Macaamiisha ee 2017.
Miisaaniyadda asalka ah ee $ 10 bilyan ayaa si weyn loogu isticmaalay iyada oo loo adeegsanayo kharash gelinta ama ballan qaadyada lacageed ee loogu talagalay mashaariicda waaweyn sida LNG Canada, oo ah guriga ganacsiga Mitsubishi Corp (8058.T) uu saami ku leeyahay, iyo mashruuca Mozambique LNG kaas oo ganacsade Mitsui & Co (8031) .T) waxay leedahay saami, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaarada warshadaha.
Wadanku wuxuu horey u tababaray in kabadan 400 khubaro ah tan iyo 2017, sarkaalka METI ayaa sidaas yidhi.
Previous articleSisi warns Ethiopia: We will not allow the imposition of a fait accompli
Next articleMadaxweyne Farmaajo “oo khudbad ka jeediyey fadhi gaar ah oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya”